Qaxootiga Somalida dalka dib ugu laabtaya oo tiradooda soosaartay UNHCR – STAR FM SOMALIA
Hay’adaha Qaramada Midoobay u qaabilsan Qaxootiga UNHCR, ayaa shaacisay tirada Qaxootiga Somaliyed ee dalka dib ugu soo laabtay, tan iyo Bishii December ee sanadkii 2014-ka.
UNHCR, ayaa sheegtay 4,108 ruux inay dalka dib ugu noqdeen tan iyo Bishii December ee sanadkii 2014 sidoo kale Hay’adda ayaa sheegtay in 250 ruux ay mareen dhulka, halka 224 kalena ay saareen Diyaarado kuwaas oo la geeyay Soomaaliya 15-kii hore ee bisha September.
UNHCR ayaa sheegtay dhamaan dadkaan in laga qaaday Xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya, halkaasi oo ay daganaayeen sanado badan, waxaana dadkaan lagu kaxeeyay rabitaan dhankooda ka yimid.
“Tirada guud, waxa ay noqoneysaa ee aan caawinay ee sida iskooda ahna ugu laabtay Soomaaliya 4,108 ruux 15-kii hore ee Bisha September waxaa dhulka ku safray 3,510 waxaa sidoo kale aan diyaarad saarnay 598 kale” Ayaa lagu sheegay Warbixin ay ka soo saareen xafiiskooda Magaalada Nairobi Hey’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Qaxootiga ee UNHCR.
Dadkan dalkooda Somaliya dib loogu soo celiyay, ayaa kala tagay Gobolada dalka, gaar ahaan Gobolka Jubadda hoose, Gobolka Gedo iyo qaar si toos ah looga soo dejiyay Gobolka Banaadir.
Dowladda Somaliya, Qaramada Midoobay iyo Dowladda Kenya ayaa horay u kala saxiixday heshiis saddex geesood oo dhigaayay in Qaxootiga Somaliyed ee dalka Kenya ku nool si iskooda ah dalka Somaliya loogu soo celiyo.
Somaliya ayaa hada u muuqata mid ka soo kabanaysa sanado badan oo colaado ah, inkastoo weli ay taagan yihiin dagaaladii ay ka barakaceen kol hore dadkaan.